ओपिडीको टिकट लिन लाइन बस्न नपर्ने, घरबाटै यसरी गर्न सकिन्छ ? – Jagaran Nepal
ओपिडीको टिकट लिन लाइन बस्न नपर्ने, घरबाटै यसरी गर्न सकिन्छ ?
काठमाडौं । कान्ति बाल अस्पतालले ओपिडीको टिकट अब घरबाटै लिन मिल्ने गरी एप्सको विकास गरेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री भानुभक्त ढकालले मन्त्रालयमा आज आयोजित कार्यक्रममा सो एप्सको शुभारम्भ गर्दै यसबाट उपभोक्तको समयको बचत हुनाका साथै उपचार प्रक्रियासमेत सहज हुने बताउनुभयो । एप्सको प्रयोग गरिएसँगै न्यून जनशक्तिका भरमा काम गर्न सजिलो हुने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
“घण्टौँ लाइनमा बस्नुपथ्र्यो, अब यसले त्यो समस्या हटाउने निश्चित छ”, उहाँले भन्नुभयो, “यो सेवा चर्चा पाउनेसम्मका लागि सीमित बन्नु हुँदैन, यो सेवालाई निरन्तरता दिनसक्नु पर्छ ।” अस्पतालमा लाग्ने भीडलाई व्यवस्थित गर्न प्रयोग गरिँदै आएको जनशक्तिलाई अब अन्य काममा लगाउन सकिने उहाँको भनाइ थियो ।
बेलायतमा भेटियो अर्को भाइरस : के हो मन्कीपक्स ? कस्तो हुन्छ र यो कति ख’त’र’ना’क ?
भारतवाट आयो फेरि अर्को ख’त’रा’को खबर खोपले पनि काम नगर्ने अर्को भेरियन्ट देखियो
चीनको पक्षमा बोल्यो डब्लुएचओ, अमेरिकालाई भन्यो ‘धेरै दवाव नदिनु’
यी हुन् अंगुर खाँदा हुने १३ भन्दा बढि फाइदा